ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မော်ကွန်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း မောပန်းခြင်း
ဆုရရှိသူတူအဘယျသို့ကြည့်ရှုကြပါ? သူတို့အရပ်ရှည်ရှည်သို့မဟုတ်အတို Are? Black ကသို့မဟုတ်အဖြူ? အားကြီးသောသို့မဟုတ်အားနည်း? ငါကကျနော်တို့အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအပေါ်မူတည်ခန့်မှန်း “ဆုရှင်ပါ။”
ငါသည်တရှည်ရှည်တစ်ဖတ်ပြီးအဖြစ်ကဒီအတိတ်တစ်လတစ်ဆုရှင်၏ဇာတ်လမ်းသို့စို့ခဲ့, မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်၏ပေမယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ. သူနှင့်အတူလူအတော်များများရဲ့စွဲသူရဲကောင်းကိုးကှယျအပေါ်နယ်စပ်အဘယျကွောငျ့အသေးစိတျအကောငျ့ကိုအကြှနျုပျသတိပေး. အများစုကအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပွောနိုငျ “မိမိအ airness” ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတစ်ဦးဆုရှင်မယ့်အစဉ်အဆက်တောင်းဆိုနိုင်. သူသူအပေါင်းချန်ပီယံကွင်းရတယ်မရောက်မီသူတစ်ဦးဆုရှင်တူခဲ့, သော်လည်း?
သင်စာအုပ်ဖတ်အဖြစ်, ဒါကြောင့်သူကချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသလိုပဲ. တစ်နည်းနည်းလိဂ်အိုးအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အငယ်တန်း varsity ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားအဖြစ်သူ၏ထူးချွန်ကစားခဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်; မိမိအအထက်တန်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်း spurt သို့မဟုတ် UNC မှနဲ့သူ့ရဲ့ပထမနှစ်စဉ်အတွင်းသူ့အဂိမ်းအနိုင်ရရိုက်ချက်.
ငါသည်တချီကာဂို Bull ကဲ့သို့မိမိချန်ပီယံအကြောင်းကိုအခန်းကြီးမှရရှိခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်, အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်များရှိကြ၏. အဆိုပါစာရေးဆရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုဖန်ဆင်းသောလမ်း၌သူ၏ဇာတ်လမ်းကပြောသည်: ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဦးဆုရှင်ဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်. ထိုကျနော်တို့အဘို့သူ့ကိုသိသောအရာကိုင်: ခြောက်ခုချန်ပီယံကွင်းကိုအနိုင်ရ, ငါး MVPs, နှင့် 14 အားလုံးစတားပွဲ…